ဆွီဒင်လူမျိုးများရဲ့ ပြင်မရတော့တဲ့ အကြီးမားဆုံးနောင်တ ၊ မြန်မာပြည်သို့ရောက်နိုင်သလော | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on January 27, 2014
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး.	Tagged: ဆွီဒင်.	Leaveacomment
“ဆွီဒင်အမျိုးသမီးလေးယောက်တွင် တစ်ယောက်မှာ ၎င်းတို့ နေထိုင်ရမှုသည် လုံခြုံခြင်းမရှိဟု ခံစားနေရပြီး ဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦးမှာ ညအချိန် တစ်ယောက်တည်း အပြင်မထွက်ရဲဟု ဆွီဒင်အမျိုးသား မှုခင်းတားဆီးရေးကောင်စီမှ ၎င်းတို့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးလေ့လာမှု၌ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည်။”
← အစ်စလမ် ခြေမှုန်းရေး အတွက် စပိန်ပြည်သူများ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ့ပြီ
မူဆလင်တွေဟာ မြန်မာပြည် အပေါ်သစ္စာရှိကြောင်း ကဗျည်းထိုးခြင်းများ →